အောင်မြင်နေတဲ့ ဘ၀ကိုရခဲ့ပေမယ့် အကြော်ရောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ သားငယ် – Cele Posts
အောင်မြင်နေတဲ့ ဘ၀ကိုရခဲ့ပေမယ့် အကြော်ရောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ သားငယ်
အဆိုတော် သားငယ်ကတော့ Myanmar Idol Season2သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Winner ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြိုင်ပွဲကာလ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ဝန်းရံ အားပေးမှုကို အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ သားငယ်က အခုဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ ဘဝကို ရရှိထားပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားငယ်က အသံကောင်း သလို အရည်အချင်းလည်း ရှိတာကြောင့် ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်း ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အရင်က ချစ်ဇနီးချောလေး နဲ့အတူ အကြော်ရောင်းခဲ့တဲ့ သားငယ်က အခုလို အောင်မြင် နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလေး ကို တန်ဖိုးထားကာ လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားငယ်တို့ဇနီး မောင်နှံက အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမောင် တစ်ထမ်းမောင်တစ်ရွက် ဆောင်ရွက် တတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကပါ သဘောကျ နေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း သားငယ်က ချစ်ဇနီးနဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သားငယ်က “ပဲစိမ့်ကြော် ရောင်းမယ်ဟေ့ !Live လွှင့်ပြီးရောင်းရမလား ! Delivery နဲ့ ပို့ရမလား ” ဆိုပြီး အကြော်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပကာသနတွေ ကင်းတဲ့ သားငယ်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ဘဝလေး ကတော့ အရမ်းကိုအေးချမ်းပြီး ပျော်စရာကောင်း နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် အဆိုတော်သားငယ် တို့စုံတွဲရဲ့ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
အောငျမွငျနတေဲ့ ဘဝကိုရခဲ့ပမေယျ့ အကွျောရောငျးတဲ့ အလုပျကို လုပျကိုငျနဆေဲ ဖွဈတဲ့ သားငယျ
အဆိုတျော သားငယျကတော့ Myanmar Idol Season2သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးမှာ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး Winner ဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ဆှတျခူး ရရှိခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ ။ ပွိုငျပှဲကာလ တဈလြှောကျလုံးမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ဝနျးရံ အားပေးမှုကို အမြားဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ သားငယျက အခုဆိုရငျ အောငျမွငျတဲ့ ဘဝကို ရရှိထားပွီ ဖွဈပါတယျ ။ သားငယျက အသံကောငျး သလို အရညျအခငျြးလညျး ရှိတာကွောငျ့ ဂီတလမျးကွောငျးပျေါမှာ ဆကျလကျလြှောကျလှမျး ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။
အရငျက ခဈြဇနီးခြောလေး နဲ့အတူ အကွျောရောငျးခဲ့တဲ့ သားငယျက အခုလို အောငျမွငျ နတေဲ့ အခြိနျမှာတောငျ သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျစီးပှားရေး လုပျငနျးလေး ကို တနျဖိုးထားကာ လုပျကိုငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ ။ သားငယျတို့ဇနီး မောငျနှံက အလုပျလုပျတဲ့နရောမှာလညျးမောငျ တဈထမျးမောငျတဈရှကျ ဆောငျရှကျ တတျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေပါ သဘောကြ နရေတာ ဖွဈပါတယျ ။ အခုလညျး သားငယျက ခဈြဇနီးနဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို မြှဝထေားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
သားငယျက “ပဲစိမျ့ကွျော ရောငျးမယျဟေ့ !Live လှငျ့ပွီးရောငျးရမလား ! Delivery နဲ့ ပို့ရမလား ” ဆိုပွီး အကွျောရောငျးတဲ့လုပျငနျးမှာ ပြျောရှငျနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ပကာသနတှေ ကငျးတဲ့ သားငယျတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့ဘဝလေး ကတော့ အရမျးကိုအေးခမျြးပွီး ပြျောစရာကောငျး နတောပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ ခဈြပရိသတျတှေ အတှကျ အဆိုတျောသားငယျ တို့စုံတှဲရဲ့ပုံလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
သူမကိုယ်တိုင် ချုပ်ထားတဲ့ Maskလေးတွေကို လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းသွားမယ် ဆိုတဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည်
သူမရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဝေဘာဂီ ဆေးရုံကို အလှူငွေ သွားရောက် လှူဒါန်း ခဲ့တဲ့ စံထိပ်ထားဦး